साहित्य Archives - Khotang Post
कविता- “सतर्कताको अनुरोध” पानीको विरोध आगोले कहिल्यै गर्न सक्दैन तर जब आगोले न्यानोपन दिन छोड्छ! आगो भएरै आगो हुनुको धर्म भुल्छ! अनि सीमा नाघेर डढेलो जान थाल्छ! तब आगोको विरोध चाहिँ पानीले अवश्य गर्छ। यतिबेला हामी पानी हौँ र आगोहरु सीमा नाघेर बलिरहेछ- राष्ट्रको माथिल्लो अंगहरुमा। त्यसैले याद रहोस्! पानीले दृढ इच्छा राखि पछि- सिमसिमे […]
शिक्षकले कोठामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै भन्नुभयो: आज म तिमिहरुलाई सरप्राइज परीक्षा लिन्छु । शिक्षकको कुरा सुनेपछि सबै बिद्यार्थीको होस् हवास ठाउमा रहेन , सबैको मनमा चिन्ता बढ्न थाल्यो । कोहि किताबका पाना पल्टाउन थाले त कोहि नोट पढ्न थाले..। यि सबै पढेर केहि काम छैन.. शिक्षकले मुस्कुराउदै भन्नुभयो । म प्रश्न पत्र तिमिहरुको डेक्स अगाडि […]
को बिरामी छैन र राष्ट्रियताको भजन गाउनेहरु बिरामी छन गरिव सर्वहारा मजदुरका नारा दिनेहरु बिरामी छन सिंहदरबार अगाडी देश चलाउन लाइन बसेका बादरका बथानहरु बिरामी छन मज्जित मन्दिर चैत्य र गुम्बाहरुमा एक छाक भोको बसि प्राथना गर्ने नारदहरु बिरामी छन अनि भन त यहाँ कसरी धार्मिक सहिष्णुता छ मन्दिरका पुजारीहरु बिरामी छन कसरी सुरक्षित रहुन […]
भन्छन् एकदिन तँलाई छाडेर जान्छु….तर एकदिन पनि हामी बिना एक्लै बस्न सक्दैनन् …। “साचै नै श्रीमान झुट बोल्छन्…”.. “दिनभरि फोनमा झुन्डिरहन्छे , भन्दै भन्छन् क्यामेरा बिनाको Nokia 1200 ल्याइदिन्छु भन्दै … आफै स्मार्ट फ़ोन बोकेर ल्याइदिन्छ्न ….।” “साचै नै श्रीमान एक नम्बरको झुट हुन्छन् …”… “तरकारीमा बढी नुन लाग्दा भन्छन् .. भरै अफिसबाट फर्किदा होटलबाटै […]
एक मनुष्यले नारदमुनिलाई भन्यो: मेरो भाग्यमा कति धन छ? नारादमुनिले भने: भगवान बिष्णु लाई सोधेर भोलि भन्छु। नारदमुनिले भने: दिनहु १ रुपैयाँ तिम्रो भाग्यमा छ… मानिस धेरै नै खुशी भयो , उसको दैनिकी जरुरत १ रुपैयामा पूरा हुने गर्थ्यो । … एकदिन उस मानिसको साथिले भन्यो: तिम्रो खुशियाली जिबनशैली देखेर धेरै नै प्रभावित भएको छु। […]
जङ्गली अमिलो भकिम्लो । यसका अरुअरु नाउँ पनि छन् जस्तै भकिउँलो । भक्मिलो । भक्यौलो । भकिम्लो मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइने गुणकारी वनस्पतिभित्र पर्छ ।यसको उपयोगी अङ्ग भनेकै फल हो । जुनेलाका जस्ता ठुलाठुला झुप्पा लपक्क झुलेको हुन्छ । वर्षमा एकचोटि झुप्पा संकलन गर्न सकिन्छ । कात्तिक मंसिर महिना भकिम्लो सङ्कल गर्ने उपयुक्त समय हो । […]
आज बिहान-बिहानै फ़ेरि माइत बाट काकाको फ़ोन आयो … दुर्गा… तिम्रो बुबा बिरामी हुनुहुन्छ … खबर सुन्ने बित्तिकै दुर्गाको दिमागले काम नै गरिरहेको थिएन । ससुरा .. ज्यु ले देखिरहेका थिए कि बुहारी दुर्गा काममा ढिलाचुस्ती गर्दै , बिहान् देखि निराश पनि थिइन । अनुहारमा सधैंको जस्तो आज हसिलो चमक पनि थिएन… आखिर जब चिया […]
१४ दिनको बसाई पछि सन्तोष आफ्नो कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट हातमा लिएर कोभिड अस्पतालको रिसेप्शनमा उभिइ रहेको थियो । … वरपर केही ब्यक्तिहरु ताली बजाउदै थिए .. र उसलाई बधाई दिई रहेका थिए । एउटा लडाइ त उसले जितेर आएको थियो तर सन्तोष को अनुहारमा निराश पनको गहिरो छाया थियो ।… घर फर्किने क्रममा बाटोभरी गाडिमा […]
Dear श्रीमान म तपाइँलाई मेरो लागि जुनतारा टिपेर ल्याइदिनु भन्दिन , तर जब बाहिरबाट घर आउनुहुन्छ, साथमा एक मुस्कान लिएर आउनुहोस्… । म भन्दिन, कि सबैभन्दा बढी माया मलाई नै गर्नुहोस् , तर एक नजर मायाले त हेर्नुहोस …। म भन्दिन , कि बाहिर खुवाउन लिएर जानुहोस् , तर एकपटक साथमा सँगै बसेर त खाने […]
जिबनको बास्तबिक परिचय —*— सन्तोष कार्की / बिबाह गरेको केहि बर्ष पछि श्रीमती लाई बिचार आयो कि यदि उनी आफ्नो श्रीमान लाई छाडेर अन्तै गएपछि श्रीमानले कस्तो महसुस गर्लान् । यो बिचार उनले कागजमा लेखिन: “अब म तपाईंको साथमा यो भन्दा बढी बस्न सक्दिन , म तपाईं बाट दिक्क भैसकेको छु आज घर छाडेर सदाको […]